T-28 Trojan dia fiaramanidina fampiofanana ampiasain'ny US Navy aorian'ny 1949. Izy io dia soloin'ny T-34 Mentor. Ity fiaramanidina ity dia afaka hivezivezy amin'ny mpitatitra iray. (FSX & P3D serasera mifanentana dia azo jerena eto)
Zava-mahagaga add-amin'ny teratany ny FS2004 payware teo aloha fa ankehitriny maimaim-poana! Ahitana sivy textures, ny VC amin'ny fomba amam-panao sy 4 gauges modely. Ampiasao ny baikoina T fanalahidy ho an'ny tailhook. Vakio ny readme ho an'ny asa hafa.